Ubaxyada Japan - Kuwa ugu badan ee lagu dhex arko tattoos | Tattoo
Tattoos ee ubaxyada Japan ugu muhiimsan
Waxaa jira dad badan ubaxa japanese, laakiin in yar ayaa loo doortay inay ka mid noqdaan tattoosyada waaweyn. Taasi waa sababta maanta aan kuu tusin doonno xulasho iyaga ka mid ah iyo dabcan, macnahooda weyn. Ubaxyadu had iyo jeer waxay leeyihiin astaamo u gaar ah sannado badanna, waxaan u adeegsan jirnay inaan ku muujino dareenno.
Marka markaan ka hadlayno tattoos ubax, nagama tagi karno. The luqadda ubaxa, ayaa la sheegay inuu ka dhici doono Bariga. Si tartiib tartiib ah ayuu u faafaa laakiin macnahiisa waaweyn iyo farriimaha qarsoon ayaa had iyo jeer la hayaa. Maanta waxaan ka ogaaneynaa iyaga hoosta!
1 Ubaxyada Japanese-ka ee ugu badan ee lagu arko tattoos
1.1 Ubax Luud
1.2 Cherry Blossom
1.4 Ubax Amaryllis
Ubaxyada Japanese-ka ee ugu badan ee lagu arko tattoos
Dhaqanka Jabbaan iyo waliba caadooyinkiisa ayaa si dhow ugu xidhan dabeecadda. Sidaa awgeed layaab ma leh in ubaxyadu qayb weyn ka yihiin dhammaantood. Marar badan, macnayaasha waxay kuxiranyihiin caqiidooyinka diinta, laakiin shaki la'aan, markay timaado in lagu sawiro tattoo ubaxyo Japanese ah, waxaan had iyo jeer siin karnaa macno cusub oo aan shakhsi ka dhigan karnaa.
Mid ka mid ah kuwa ugu cajaa'ibka badan ee la dalbado ee ubaxyada ku yaal sawirkaan ayaa ah ubax lotus. Waa mid ka mid ah astaamaha waaweyn ee Buddhism-ka, tan iyo markii sidaas la sheegay wuxuu matalaa nolosha Budha. Nolol ku suntan dhibaatooyin laakiin haddana, ay ku guuleysatay inay ka gudubto. Marka, ubaxa lotus wuxuu leeyahay macno halgan, iyo sidoo kale kaamil iyo run. Ma hilmaami karno in mid ka mid ah macnaheeda weyn ay tahay sidoo kale daahirnimada u dhaxeysa jirka iyo nafta. Dabcan, macnayaasha sida quruxda iyo xarrago ayaa sidoo kale la helay.
Ubax Cherry waa mid kale oo ka mid ah ubaxyada ugu caansan Japan. Xaaladdan oo kale, laga yaabee inay sabab u tahay isku-darka midabkiisa iyo weliba joogitaankiisa oo gaaban. Waxaa la arki karaa oo keliya waqti aad u gaaban sanadka. Wax marwalba xoogaa murugo leh maxaa yeelay quruxdiisa ayaa meel walba daadata. Marka, macnaheeda waxay kuxirantahay howshan. Sidee nolosha u gaaban tahay, waqtiga degdegga ah ee waqtiga ama quruxda dumarka, iyo sidoo kale daacadnimada.
Shaki la'aan, ka peony sidoo kale wuxuu nagu fatahaa midabkiisa waaweyn. Haddana quruxda ubaxa ayaa lagu soo ururiyey wax walba nooca tattoos. Intaa waxaa dheer, in kasta oo ay badanaa u dhexeeyaan naqshadaha waaweyn, haddana waxaa jira qaybo badan oo jirka ka mid ah oo diyaar u ah inay xirtaan. Xaaladdan oo kale, waxaan ka hadlaynaa macnaha ubax sida peony. Waxaa loo arkaa ubaxa hantida iyo barwaaqada, iyo sidoo kale nasiib wacan.
Dabcan, sidoo kale waxay leedahay macnayaal ka yaab badan. Waxaa la sheegay sidoo kale waa astaan ​​qaadashada khataraha. Wax sida isku dayga lagu gaarayo caqabadaha nolosha qaarkood. Waxaa laga yaabaa inay tahay sababta oo ah mar labaad ayay tahay in ubaxani sidoo kale xambaarsan yahay macno ka qarsoon oo ku saabsan nolosha iyo waqtiga yar ee aan ku raaxaysan karno.
In kasta oo marar badan shaki uu soo bixi karo, tattoos leh ubax kaliya maahan dumarka. Waxaad had iyo jeer dooran kartaa naqshad isku dhafan oo leh shakhsiyad badan, laakiin halka kuwani ay sidoo kale isku dhafan yihiin. Hadda waa wareegga ubaxa loo yaqaan Amaryllis. Waxaa la sheegaa in macnaha ugu horeeya ee la siiyaa ay tahay xishoodka.
Dabcan, sidoo kale waxaa jira mid xoogaa ka duwan. Guushu waa macnaha weyn ee ubaxa Amaryllis. Waxaan caddaynaynaa inaysan u dhigmin oo keliya dagaal ama iska hor imaadyo, laakiin loo qaadi karo qaybaha kale ee nolosheena. Markaa markii aan wax ka weydiinno astaamaheeda waxaa noo haray dadaal iyo u heellan.
In kastoo bamboo waa geed, tan tan sidoo kale ubaxyo aad u qurux badan ayaa ka soo baxay. Xaqiiqdii, sida oo kale, waxay ahayd inay ka mid noqoto xulkeenna ubaxyada Japan. Muhiimadda dhirtaan ayaa muhiim u ah dhaqankeeda. Intaas waxaa sii dheer, markay tahay tatuuga, waxaan dhihi karnaa waxay leedahay macno weyn: cimri dherer.
In kastoo aan aragno sida jiridiisu ugu foorarsato, ma jabto. Marka, waa mid ka mid ah astaamaha ugu xoogga badan uguna cimriga dheer. Sidaa awgeed waan qaadan karnaa macnahan haddii aan ka fekereyno inaan ku xirno jirka. sidoo kale kara astaan ​​u ah jidka noloshaiyo waliba xoog. Maxaad ugu jeceshahay dhammaantood?
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta » Tattoos ee ubaxyada Japan ugu muhiimsan
Tattoo wadnaha farta
Eeyga oohinta dayaxa, astaamaheeda dhaqamada kala duwan